I-IBM Smarter Commerce: Ipulatifomu ye-Advanced Social Analytics | Martech Zone
Ukuhweba Okuhlakaniphile kwe-IBM izinsizakalo seziguqukele ebhizinisini futhi zamukela ngokuphelele amasu okuhamba kanye nezenhlalo. Umgomo wePlatform yabo ye-Advanced Social Analytics ukuthuthukisa ukwenza ngokwezifiso usebenzisa amandla wezokuxhumana nabantu nedatha enkulu.
IBM Smarter Commerce ithuthukile kwezenhlalo analytics izimayini zamapulatifomu futhi zivuna izinyathelo zomphakathi zomthengi futhi zihlanganisa ubuhlakani bebhizinisi ukuze zisebenzise izincomo ezenziwe zaba ngezakho. Ukuhlanganisa okwenziwa ngumthengi nomlando wobudlelwano bomlando kunikeza ithuba lokuqagela lokwenza izinqumo ezinenzuzo enkulu futhi likwenza ukwazi ukwenza ukuxhumana ngokwezifiso namakhasimende akho.
Amaphuzu avelele wePulatifomu Yezobuchwepheshe Othuthukile:
Isebenzisa imithombo yezenhlalo yomthengi ukusiza ukudala ukusakazwa kwemali engenayo okusha nokukhuphula ama-upsell nokuthengisa okuthengiswayo ngokunikela okunikezwayo okwenziwe kwaba ngokwakho okwengeziwe.
Ithuthukisa ukwethembeka futhi ilindele izidingo zamakhasimende akho ngokuncoma imikhiqizo ethenjiwe yinethiwekhi yomthengi yomphakathi.
Kukhulisa ukuqonda komkhiqizo nokwaneliseka kwamakhasimende ngokufingqa ukubuyekeza kanye nokuhlaziywa kwemizwa okumbiwa kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Tags: Ipulatifomu Ethuthukile YezenhlaloASAPidatha enkuluCommerceIBMI-IBM Smarter CommerceUkuhweba Okuhlakaniphileezentengiso yenhlalosocial media